पोखरा रंगशालामा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल मैदानको प्रारम्भिक खाका सार्वजनिक. – Sabaikoaawaj.com
पोखरा रंगशालामा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल मैदानको प्रारम्भिक खाका सार्वजनिक.
सोमवार, असार ५, २०७४ 8:44:05 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौ, ५ असार /पोखरामा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न फुटबल मैदानको प्रारम्भिक डिजाईन सार्वजनिक गरेको छ । यसैवर्ष भित्र निर्माण कार्य शुरु हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशालाको आइतबार सिंहदरबारस्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमबीच रंगशालाको प्रारम्भिक खाका सार्वजनिक गरिएको हो ।
पोखरा रंगशाला भित्र रहेको फुटबल मैदान भत्काएर त्यस स्थानमा नयाँ सुबिधासम्पन्न रंगशाला बनाइनेछ । अनुमानित ८५ करोड लागत लाग्ने रंगशाला ४ सय रोपनी जग्गामा फैलने छ । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल मैदानसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एथलेटिक्स ट्रयाक रहनेछ । निर्माणको जिम्मेवारी पाएको संस्था एन डी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले पोखरा रंगशालाको डिजाइन प्रस्तुत गरिएको थियो । एन डी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले तयार पारेको ढाचाअनुसार रंगशाला करिब ३० हजार दर्शक क्षमताको बन्नेछ । रंगशालाको चार दिशामा प्याराफिट रहनेछ । पोखरा रंगशालामा हाल दुई स्थानमा मात्र प्याराफिट रहेको छ ।
आइतबार भएको छलफलपछि निर्माणको जिम्मेवारी पाएको संस्था एन डी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले असार १५ गतेभित्र पूर्ण खाका ल्याउन आदेश दिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेस प्रसाद दाहालले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा र अर्को आर्थिक वर्षमा काम गर्ने गरी वातावरण मिलाउन असार १५ गतेभित्रै पूर्ण खाका ल्याउन आग्रह गरेको हो । त्यसका लागि डिजाइन कम्पनीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ शाखा, अखिल नेपाल फुटबल संघ ९एन्फा० लगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरेर तयार पार्न भनेको छ ।
‘तीनै पक्षले आपसमा छलफल गरेर असार १५ गते भित्रै खाका ल्याउन सके नयाँ आर्थिका वर्षमा टेण्डर आह्वान गर्न सकिन्छ ।’ सचिव दाहालले भने, ‘१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद नेपालमै आयोजना हुदैछ । त्यसैले पनि कम्तीमा एकवर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिए १३ औं साग समयमै गर्न सकिन्छ ।’ यस्तै सचिव दाहालले एन डी इन्जिनिय
प्रकाशित मितिः सोमवार, असार ५, २०७४ 8:44:05 PM